ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက မန္တလေ… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက မန္တလေ…
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက မန္တလေးမြို့တွင် (၂၂.၆.၂၀၂၁) ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သော လက်နက်ကိုင် ပစ်ခတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၁)ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း
ပြင်သစ်အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေများအကြောင်း တွေ့ဆုံကြားနာခဲ့တဲ့သတင်း တွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 10K Share – 850
Christian Dee NH says:
2021-06-24 at 10:45 PM
2021-06-24 at 10:55 PM
2021-06-24 at 11:07 PM
2021-06-24 at 11:22 PM
ပြည်သူ များအနေဖြင့်လဲ တဦးချင်း စီ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး
Revolution အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ကြပါစို့.
CalfeLoveဂူး ဂူး says:
2021-06-25 at 12:40 AM
၂ ခြမ်း ကွဲ ရင်
ဘယ်လောက်ပင် ဆင်းရဲ ဆင်းရဲ…
အမေစု ရှိတဲ့ ဘက်မှာ နေမယ်။
2021-06-25 at 12:42 AM
Akha Light Home says:
2021-06-25 at 5:23 AM
အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်၊၊Thank you so much for France
2021-06-25 at 6:03 AM
2021-06-25 at 6:40 AM
2021-06-25 at 9:01 AM
Soe Naing Taze says:
2021-06-25 at 10:53 AM
We must win Spring Revolution.
ZaTau ZaTau says:
2021-06-25 at 5:03 PM
2021-06-25 at 5:16 PM
สมชาย หยี่หว้า says:
2021-06-26 at 11:38 AM
2021-06-26 at 9:09 PM
Arthur Kyaw Zin says:
2021-06-27 at 12:00 PM
ခ်စ္သူ ရင္ခြင္ says:
2021-06-27 at 7:53 PM
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ရင်ထဲက အသံတွေက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို…